Princess Cruises dia mitondra fitsangantsanganana premium any Malezia Atsinanana sy Brunei
Home » Lahatsoratra mampiavaka » Princess Cruises dia mitondra fitsangantsanganana premium any Malezia Atsinanana sy Brunei
Desambra 3, 2015
SINGAPORE - Carnival Corporation & plc dia nanambara androany fa ny marika Princess Cruises dia manararaotra ny fitomboan'ny lazan'ny fitsangantsanganana an-tsambo amin'ity faritra ity amin'ny alàlan'ny fiainana traikefa an-dranomasina.
SINGAPORE - Carnival Corporation & plc dia nanambara androany fa ny marika Princess Cruises dia manararaotra ny fitomboan'ny lazan'ny fitsangantsanganana an-tsambo amin'ity faritra ity amin'ny alàlan'ny fitaterana traikefa an-dranomasina premium ho an'ireo mpandeha avy any Sabah, Sarawak ary Brunei amin'ny vanim-potoana fanaovan-trano.
Sapphire Princess, iray amin'ireo sambo 18 amin'ny fiaramanidina, dia monina ao amin'io faritra io ankehitriny amin'ny vanim-potoana fanabeazam-bahiny faharoa manomboka ny volana novambra 2015 ka hatramin'ny martsa 2016, ka nahatonga ny sambo fitsangatsanganana avy any Singapour ka hatrany Azia atsimo atsinanana any Malezia, Indonezia, Vietnam, Kambôdza ary Thailand. Ity dia iray amin'ireo fametrahana lehibe indrindra amin'ny alàlan'ny tsipika fitsangantsanganana premium any amin'ny faritra, manarona firenena fito sy seranana 12, mihoatra ny halavan'ny sambo fitsangantsanganana manomboka amin'ny telo ka hatramin'ny 11 andro.
Nitsidika an'i Muara, Brunei nandritra ny iray andro i Sapphire Princess ary nasaina nidina an-tsambo ny maso ivoho mpiasan-dàlana ary koa ny mpikambana amin'ny haino aman-jery mba hiaina ho azy ireo ireo fotodrafitrasa lafo vidy. Ireo vahiny ao amin'ny Sapphire Princess dia hankafy ny traikefa mahazatra an'ny Princess Cruises izay ahitàna karazana fisakafoanana kilasy eran-tany, fiantsenana tsy misy andoavana ary fialamboly, ankoatry ny fanavaozana sonia toy ny Movies Under the Stars, farihy ambony sisin-dàlana teatra, ary The Sanctuary, fialamboly ambony latabatra natao ho an'ny olon-dehibe ihany.
"Ny Cruising dia lasa safidy fitsangantsanganana malaza ho an'ny mpizahatany avy any Sabah, Sarawak, ary Brunei noho ny fitomboan'ny faniriana hizaha ny faritra amin'ny fomba tokana," hoy i Farriek Tawfik, Talen'ny Azia atsimo atsinanana, Princess Cruises. “Ny fizaran-tanindrazana any Azia atsimo atsinanana sy ny fitsangantsanganana an-dranomasina kilasy eran'izao tontolo izao dia hanome ny vahiny traikefa tsy hay hadinoina tadiavin'izy ireo.”
Nahazo valisoa tamin'ny fahafaham-po an'ny mpanjifa tamin'ny vanim-potoana teo aloha, nanambara i Princess Cruises fa hanomboka ny vanim-potoana voalohany ao amin'ny faritra ny Diamond Princess amin'ny taona 2016, izay ahitana karazana làlana fitetezam-paritra mitovy amin'izany amin'ny fitsangantsanganana 16 manomboka amin'ny telo ka hatramin'ny folo andro ary dia lavitra 14 sivy ka hatramin'ny 21 andro, izay fitambaran-tsambo kely.
Mifanaraka amin'ny tanjon'ny governemanta Malaysia sy Brunei ny hampiatrana ny fizahan-tany fitsangantsanganana mba hampitomboana ny fivezivezena sy ny fandaniam-bolan'ny mpitsidika. Ny vinan'i Malezia amin'ny Straits Riveria Cruise Playground dia kendrena hitondra vola mitentina 1.75 tapitrisa dolara amin'ny vola miditra nasionaly ary hamorona asa 10,000 amin'ny taona 2020 avy amin'ny fizahan-tany fitsangantsanganana.
Fironana mipoitra amin'ny fitsangantsanganana an-tsambo
Princess Cruises koa dia manatri-maso ireo mombamomba ireo mpitsangatsangana mpitsangatsangana any Azia atsimo atsinanana toa ireo mpanao asa voalohany, tanora lehibe ary fianakaviana, satria maro ny Aziatika mijery ny faritra misy azy ireo amin'ny sambo fitsangantsanganana. Mifanohitra tanteraka amin'ny tsena hafa any Eropa sy Amerika Avaratra izany, izay anjakan'ny be taona sy ny efa misotro ronono ny fitsangantsanganana an-tsambo.
"Ny firongatry ny fahalianana amin'ny fialan-tsasatra fitsangantsanganana isan-karazany avy amin'ny vondrona mpanjifa - ny voalohany, ny honeymooners ary ny mpivady, ny fianakaviana, dia goavana ary antenainay ny fitomboan'ny tarehimarika indroa miantoana amin'ireo mpandeha Maleziana sy Brunei misafidy ny fialan-tsambo fitsangatsanganana amin'ny taona ho avy", hoy Andriamatoa Tawfik.
Fanentanana amin'ny marketing
Princess Cruises dia manana fandaharan'asa fanentanana mpitsangatsangana an-tsakany sy an-davany ao amin'ilay faritra izay misongadina indrindra amin'izany dia programa fanofanana an-tserasera antsoina hoe Princess Academy izay ahafahan'ny mpiasan'ny fizahan-tany lasa manam-pahaizana momba ny andian-tsambon'i Princess, ny toerana misy azy ary ny programa. Ny Princess Academy dia natomboka tany Brunei sy Malezia Atsinanana, ary nampahery ny valiny, miaraka amin'ireo masoivohon'ny fizahan-tany maro hisoratra anarana hanombohana ny fampianarana an-tserasera.
Raha te hijery bebe kokoa ny mety ho tsenan'ny sambo fitsangantsanganana any Malezia sy Brunei, ny Princess Cruises dia hanohy ny fandaharan'asa ara-barotra sy ny fandraisana andraikitra any Sabah, Sarawak ary Brunei, hiara-miasa akaiky amin'ireo mpiasan'ny fizahan-tany mba hampiroborobo ny fitsangantsanganana ho vakansy safidy.
Mba hanompoana tsaratsara kokoa ny vahiny Singapore sy Azia atsimo atsinanana, ny Sapphire Princess sy ny Diamond Princess dia samy manana mpiasa ekipa maro fiteny amin'ny toerana manan-danja hiatrehana vahiny mandritra ny vanim-potoanan'ny homeport avy any Singapore. Ny menio fisakafoanana dia misy lovia eo an-toerana, toy ny Nasi Goreng, Laksa ary Chicken Rice, miaraka amin'ny tolotra iraisampirenena. Ny programa fampiroboroboana namboarina manokana sy ireo kojakoja hafa toy ny fisafidianana fiantsenana sy fitsaboana spa dia natao ho an'ny safidin'ny eo an-toerana ihany koa.
Princess Cruises dia manolotra traikefa vakansy misy dikany amin'ny mpandeha amin'ny fampifandraisana azy ireo amin'ny tsirairay, ny natiora, ny kolontsaina samihafa ary ny sakafo vaovao. Afaka miandrandra ny Discovery at Sea ireo vahiny, programa manokana an-tsambo namboarina niaraka tamin'ny Discovery Communication. Ny programa sy ny hetsika dia entanin'ny fananana tambajotram-pifandraisana Discovery ambony avy amin'ny Discovery Channel, TLC, Animal Planet ary Science Channel.
Ilay Princess Sapphire milanja 116,000 2,678 taonina dia mitondra mpandeha XNUMX XNUMX ary misy staterooms marobe miaraka amin'ny lavarangana tsy miankina, ny Lotus Spa, trano fisotroana divay, fisotroana divay, patisserie, pizzeria, boutiques ary cafe Internet miaraka amin'ireo fampitaovana hafa.
Ho an'ny 2016, ny traikefa an-tsambo Diamond Princess any Singapore dia hitovy tanteraka amin'ny zavatra natolotry ny Princess Cruises erak'izao tontolo izao, manome safidy fisakafoanana sy fialamboly mahavariana. Na izany aza, nisy fanovana sy fanatsarana natao mba hanintonana ny tsena aziatika, toy ny fandroana japoney izumi - ny lehibe indrindra amin'ny ranomasina - ary koa ny trano fisakafoanana Kai Sushi.
Navoaka ny lisitr'ireo toerana fialantsasatra folo voalohany
Crestline Hotels & Resorts mitombo hatrany amin'ny hotely 100
51 minitra lasa izay